राधी विद्युतको नाफामा १०.७४ प्रतिशतले कमी | गृहपृष्ठ
Home लगानी राधी विद्युतको नाफामा १०.७४ प्रतिशतले कमी
on: २४ श्रावण २०७५, बिहीबार १३:३२ लगानी
राधी विद्युतको नाफामा १०.७४ प्रतिशतले कमी
साउन २४, काठमाडौं (अस) । गत वर्ष आईपीओ जारी गरेको राधी विद्युत कम्पनीको नाफामा कमी आएको छ । असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो असार मसान्तको तुलनामा १० दशमलव ७४ प्रतिशतले नाफामा कमी आएको हो । अघिल्लो वर्ष रू. ५ करोड ९८ लाख ४७ हजार नाफा गरेको राधीले गत वर्षको असार मसान्तमा भने रू. ४ करोड ९८ लाख ४७ हजार मात्र नाफा गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
विद्युत विक्रीबाट रू. १३ करोड ७६ लाख ११ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष खर्च बढेकाले आम्दानी घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष रू. ८ करोड ४८ लाख ६४ हजार खर्च गरेको कम्पनीले गत वर्ष भने रू. ९ करोड ७८ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ ।
हाल रू. ४५ करोड १० लाख ४ हजार चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष गत असार मसान्तसम्ममा रू. ९ करोड ४० लाख ८७ हजार रहेको छ । चुक्तापूँजी एक वर्षमा ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने जगेडा कोष ७ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ११ दशमलव शून्य ५ रहेको छ ।
राधि विद्युतको नेप्सेमा शेयर सूचिकृत
४ चैत्र २०७४, आईतवार १७:१८